West Ham United Oo U Soo Bandhigtay Declan Rice Heshiis Sideed Sano Ah.
HomeWararka CiyaarahaWest Ham United oo u Soo bandhigtay Declan Rice heshiis sideed sano ah.
May 11, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska 0
West Ham United ayaa lagu soo waramayaa inay u soo bandhigtay Declan Rice fursad uu ku qalinka ugu duugo heshiis 8 sano ah kooxda.
23 jirkaan ayaa markale qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay Hammers intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2021-22, isagoo dhaliyay shan gool, waxaana uu gacan ka geystay afar caawin 48 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Rice ayaa wali wax ka badan labo sano uga harsan tahay heshiiskiisa haatan, halka kooxda ay heysato fursad ay ku kordhiso heshiiska ilaa June 2025, taasoo ka dhigeysa meel adag marka ay timaado mustaqbalkiisa.
Si kastaba ha ahaatee, wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan mustaqbalka xiddiga heerka caalami ee dalka England ayaa sii socda, iyadoo ciyaaryahanka khadka dhexe loo maleynayo inuu horay u diiday dhowr dalab oo cusub oo uga yimid West Ham toddobaadyadii dhawaa.
Manchester United ayaa la rumeysan yahay inay dooneyso inay la soo wareegto Rice suuqa soo socda, halka Chelsea iyo Manchester City ay sidoo kale weli sii wadaan xiisaha ay u qabaan adeegiisa.
Sida laga soo xigtay talkSPORT , Hammers ayaa diidan inay ka quusato inay xiddiga khadka dhexe ku sii hayso wakhti dheer, waxayna haatan miiska u saartay heshiis cusub oo weyn.
Warbixinta ayaa sheegeysa in kooxda David Moyes ay si cad u sheegeen inay diyaar u yihiin inay gacanta ku dhigaan da’yarkii hore ee Chelsea heshiis sideed sano ah oo uu ku kacayo 200,000 oo bound todobaadkii.
“Aan kuu sheego dhererka ay West Ham ku sii heyn doonto Declan Rice kooxda kubada cagta, waa fahamkeyga in West Ham ay 99% hubaal tahay inaysan iibin Declan Rice xagaagan. Declan Rice waxaa loo soo bandhigay heshiis sideed sano ah. West Ham United waxa ay ku kacaysaa 200,000 oo gini isbuucii si kor loogu qaado sicir bararka,” sidaa waxa yidhi martigaliyaha talkSPORT Jim White .
Heshiis sideed sano ah oo uu todobaadkii ku qaadanayo £200,000. Marxaladdan ma muujinayo wax rabitaan ah oo uu saxiixo, heshiiskan siddeedda sano ah wuxuu noqon karaa heshiis toban sano ah, haddii Declan iyo dadkiisa ay rabaan heshiis noocaas ah oo qiimihiisu yahay £ 200,000-toddobaadkii.”
West Ham ayaa sidoo kale lagu eedeeyay in ay aaminsantahay in aysan jirin wax fursad ah oo ay koox kasta ku heli karto 150 milyan ginni oo ay ku qiimayso xiddiga khadka dhexe inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.